Mpanamboatra fonosana tilikambo vy - Orinasa mpamokatra fonosana sy mpamatsy menaka any China
Fonosana vy amin'ny vy vita amin'ny vy amin'ny alàlan'ny fametahana ny peratra amin'ny rindrina miaraka amina ravina fenestrae roa misy ravina. Fenestrae isaky ny andalana dia misy ravina lela dimy, ny lelan'ny lela ravina tsirairay, manondro fo miverimberina, saika eo afovoany, ny toerana misy ny ambaratonga ambony sy ambany fenestrae, ny fanokafana ankapobeny ny peratra dia faritra manodidina ny 35%. ny faritry ny rindrina manodidina ny fonosana Pall Ring vokatry ny in-the-loop hanokafana rindrin'ny varavarankely betsaka, hahatonga ny tilikambo ho entona sy ranoka afaka mivezivezy malalaka amin'ny varavarankely, ny famenoana Central Powell ankehitriny dia nampiasain'ny iray amin'ireo lehibe fonosana peratra.
Metal Pall Ring dia hanana fitaovana isan-karazany, toy ny vy karbaona, vy tsy metaly 304, 304L, 410, 316, 316L, sns hisafidianana.
Fonosan'ny Tower Raschig Ring
Fehiloha vita amin'ny vy vita amin'ny vy tamin'ny taona 1914 nataon'i F. Raschig novolavolaina. Izy io dia iray amin'ireo voalohany noforonina tamin'ny geometry raikitra ny fonosana lehibe. Ny endriny tsotra, ny haavony ary ny savaivony mitovy habe aminy. peratra raschig vy dia be mpampiasa amin'ny faritra maro.
Ny peratra raschig vy dia mety ho fitaovana isan-karazany, toy ny vy karbaona, vy tsy metaly 304, 304L, 410, 316, 316 L, sns hisafidianana.
Fonosan'ny Tower Super Raschig Ring
Ny famolavolana ny Ring Super Raschig dia manome vahaolana tsara indrindra amin'ny fangatahan'ny indostria amin'ny famonosana mavesatra mavesatra. Tsy toy ny endrika fonosana teo aloha, ny Super Raschig Ring dia misoroka ny fiorenan'ny vongan-drano izay fanelingelenana matetika miaraka amin'ny enta-mavesatra be.
Ny Super Raschig Ring dia manana 30% mihoatra ny fahafaha-mavesatra, fihenan'ny tsindry ambany efa ho 70% ary fahombiazan'ny famindrana betsaka mihoatra ny famonosana vy mahazatra mihoatra ny 10%, izy ireo dia be mpampiasa amin'ny fanangonana tilikambo amin'ny indostrian'ny petrochemical, zezika simika indostria sy fiarovana ny tontolo iainana, sns.
Ny peratra raschig vy dia mety ho fitaovana isan-karazany, toy ny vy karbaona, vy tsy metaly 304, 304L, 410, 316, 316L, sns hisafidianana.
Fonosan'ny Tower Mini Ring Cascade
Ny fonosana metaly cascade-mini dia misy fonosana tilikambo tsy misy fangarony, miaraka amina sisiny bevel roa na roa eo am-pelatanany, dia matanjaka sy matanjaka kokoa amin'ny alàlan'ny herinaratra noho ny peratra pall. Ao amin'ny tilikambo fonosana tampoka, ny ankamaroan'ny peratra dia mifandraika (fa tsy ny fifandraisana an-tariby) amin'izy samy izy, dia mandray anjara amin'ny fahalefahana sary mihetsika sy ny fahombiazan'ny famindrana betsaka. Zhongtai's Metal cascade-mini peratra dia be mpampiasa amin'ny solika, simika, Chlor-Alkali ary ny tontolon'ny tontolo iainana.
Fonosin'ny tilikambo miendrika metaly mifangaro vy dia mikoriana be dia be, fidinan'ny tsindry ambany ary fahombiazana avo. Ity fonosana ity dia maka tombony amin'ny peratra raschig sy lasely intalox. Izy io dia manana tahan'ny flanging sy savaivony mety. ny fifandraisana dia ampiasaina eo anelanelan'ny peratra sy ny rindrin'ny tilikambo. Manana fananana famindrana faobe tsara kokoa izy io. Ity fonosana ity dia ampiasaina be dia be amin'ny tilikambon'ny indostria alkali-klorida, indostrian'ny solika, indostrian'ny entona arintany, indostria simika sy indostrian'ny tontolo iainana, sns.
Fonosin'ny tilikambo vy tampoka vy vita amin'ny vy, namboarin'i Dale Nutter tao amin'ny 1984, ny fahombiazany nohamafisin'ny fielezana ranon-tsavony sy ny fanavaozana ny sarimihetsika amboniny. Ny Geometry dia manome randomness ambony indrindra miaraka amin'ny akany ambany indrindra sy ny tanjaky ny mekanika faran'izay betsaka ary ny fampiasana ambonimbony kokoa izay mamela fandriana fohy kokoa. Ny fonosana ampiasaina amin'ny distillation, absorption ary tontolo iainana fandidiana hafa.
Ny vy VSP Ring (fonosana tena manokana), fantatra amin'ny anarana hoe peratra Mella eto amin'izao tontolo izao, dia karazana fonosana vy toy ny felam-boninkazo, an'ny vokatra andian-tantara samy hafa habe. Izy io dia miavaka amin'ny faritra malalaka misokatra isan-taona amin'ny rindrina, fiovana lehibe, fanoherana kely ary fahombiazan'ny famindrana betsaka.
Ny fonosana peratra vy dia vita amin'ny fametahana metaly vita amin'ny metaly, manitatra ho any amin'ny kalandrie manokana, ambonin'ny harato mankany amin'ny fitsipiky ny volom-bolongana diamondra, tariby vita amin'ny metaly fonosana mihombo. Garland filler misy fitaovana fanodinana fitaovana maro, fisafidianana fitaovana amin'ny fonosana harato dia malalaka, ary tsara ny fahombiazan'ny fanoherana. Garland filler dia manana fehezam-boninkazo famonosana plastika sy vy fenoina garland. Ny fehezam-boninkazo fonosana plastika dia niseho teo aloha, ary bebe kokoa ho an'ny fanasana gazy, tilikambo fanadiovana.
Metal Tellerette fonosana toy ny ellipse dia vita amin'ny cirques maro be miharo. Noho ny fitahirizan-drakitra avo lacuna amin'ny famonosana, dia manalava ny fotoana ifandraisana amin'ny tsiranoka amin'ny alàlan'ny tsiranoka, manatsara ny fahombiazan'ny famindrana, manana ny toetra mampiavaka ny fako be izy io, ny fihenan'ny tsindry ambany, ny fifandraisana amin'ny rano-misy, ny lanjany ambany.
Fonosan'ny Tower vita amin'ny peratra vy
Metal super mini ring (SMR na antsoina hoe peratra fisaka) fonosana tilikambo tsy misy tomika, dia mety indrindra amin'ny fivezivezin'ny fikorianan'ny rano-ranon-javatra ary mampihena ny fanangonana ny cluster droplet miparitaka. Ny fomban'ny vombony mifangaro armed symmetrika dia hanana fiatraikany tsara amin'ny homogeneitin'ny ranoka mikoriana, hampiroborobo ny fizotran'ny cyclic amin'ny fanaparitahana, ny fampiroboroboana ary ny famerenana indray ny cluster droplet, mampihena ny fihenan'ny axial back-mixing ny fonosana fonosana ary hanatsara ny fahombiazan'ny famindrana faobe ranon-javatra aondraka. Noho izany, ny fonosana dia hahazo vokatra ara-teknolojia sy ara-toekarena tsara amin'ny fitrandrahana ny famindrana rano be ranoka.